Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Hawaii » Ukuhamba okuvinjelwe okuya eHawaii izinyanga ezimbili ezingeziwe
Imikhawulo yokuhamba eHawaii
Lokhu sekuba yimantra ejwayelekile evela kumbusi waseHawaii uDavid Ige kubavakashi abacabanga ngokuza eziqhingini eziqhingini - Sicela ubambezele izinhlelo zakho zokuhamba.
Ngombusi waseHawaii namuhla, imithethonqubo yokuhamba izohlala ikhona okungenani ezinye izinyanga ezimbili.
IHawaii ilwa nezinombolo eziphakeme ngokweqile ze-COVID-19 ngokwamacala amasha nokufa ngenxa yezinhlobonhlobo ezithathelwana kakhulu zeDelta.
Kulabo abasaza eHawaii, kufanele bakhombise ubufakazi bokugoma noma imiphumela yokuhlolwa engemihle ye-COVID kungakapheli amahora angama-72 befika eHawaii noma babhekane nokuhlukaniswa kwezinsuku eziyishumi.
UMbusi ubamba isithangami sabezindaba masonto onke ku Aloha Shano, nasemasontweni ambalwa edlule, ukunxusa kwakhe bekufana - ukucela izivakashi ukuthi zilinde kuze kube kamuva ukuvakashela eHawaii.
Khona manje IHawaii inemiyalo ephuthumayo yokulawula ukuthi uhambo luqhutshwa kanjani lapho uya eHawaii, nangokubusa koMbusi namuhla, leyo mithetho izohlala ikhona okungenani ezinye izinyanga ezimbili.
IHawaii ibilokhu ibhekene nezinombolo eziphakeme ngokweqile ze-COVID-19 maqondana namacala amasha nokufa, konke lokhu kungenxa yokuhlukahluka okutheleleka kakhulu kweDelta. Akuyona into engavamile ukubona ukubalwa kwabantu abanezinombolo ezimbili ngosuku olulodwa. Emakhazeni aseHonolulu kudingeke ukuthi abeke iziqukathi ezi-3 ezifakwa esiqandisini endaweni ukuze kuhlaliswe inani eliphezulu lezidumbu ezitholwayo kanye nokuqukatha lezo ezidlulile zisuka kwa-COVID, okwamanje iningi lazo.
UMbusi u-Ige uchaze ukuthi isilinganiso sezinsuku eziyisikhombisa samacala amasha ansuku zonke ahlala ephakeme kunama-300. Izinombolo ziphakeme ngokwesabekayo kunangesikhathi i-COVID-19 iqala ukubonakala ngaso. Ngesinye isikhathi ngo-Agasti walo nyaka, kwakucishe kube namacala amasha angama-900 aqoshiwe eHawaii ngosuku olulodwa.
Kusukela lapho, iHawaii ibuse enanini labantu abangahlangana endaweni eyodwa nokuthi bangaki abangadla endaweni eyodwa ngasikhathi sinye. Kubavakashi, lokhu kusho imigqa emide ezindaweni zokudlela, futhi izindawo eziningi ezinikela ngokudla zikwenzela nje ukulanda.
ULieutenant Governor waseHawaii uJosh Green, ophinde abe ngudokotela we-ER, ubelokhu ebheke izinombolo zokulaliswa esibhedlela ngeso lokhozi. Uveza ngokushesha ukuthi iningi lalabo abalaliswa esibhedlela njengamanje njengeziguli ze-COVID, yilabo abangagonyiwe. Idatha ikhombisa ukuthi cishe ama-90% alabo abadinga ukwelashwa esibhedlela i-COVID abawutholanga umuthi wokugoma, futhi lelo phesenti lihlala lingaguquguquki usuku nosuku.
Njengamanje, ukugqokwa kwamamaski kuphoqelekile ezindaweni zomphakathi zasendlini, futhi ukungena ngisho nasekusungulweni kokudla noma kungenxa yokudlela noma ukumunca nje, umuntu kufanele akhombise ikhadi lokugoma eligcwalisiwe ukwenza lokho.
Ngaphandle kokuthi iHawaii isondela ezingeni elalithathwa njengelihlonishwe kakhulu lama-70% ukufeza ukucabanga komhlambi - njengamanje ku-68% - uMbusi akasakuboni ukuwela lo mkhawulo njengophawu lwemikhawulo yokuxegisa. Ukwahlukahluka kwe-Delta kwendalo ethelelana kakhulu kwenza leyo njongo eyake yaba yingqophamlando manje inganakwa.
Okukhathaza kakhulu abasebenzi bezokunakekelwa kwempilo nezibhedlela abeluleke ngaphezu kwezimo ezijwayelekile bengena onyakeni wesibili. Abasebenzi basebenza ngokweqile futhi izinombolo zemibhede etholakalayo yeziguli ze-COVID kufanele zibhekwe njalo ukuze izibhedlela zisakwazi ukwamukela ezinye izinhlobo zeziguli ezidinga usizo lwezokwelapha.
Kulabo abasathatha isinqumo sokuya eHawaii, kufanele bakhombise ubufakazi bokugoma noma imiphumela yokuhlolwa engemihle ye-COVID kungakapheli amahora angama-72 befika eHawaii noma kuzobekwa ukuhlukaniswa kwezinsuku eziyishumi.
Okuningi ku-: Covid-19 | Honolulu | Hawaii | Covid
I-Heathrow: Ukukhula kuqale ngo-2022, kodwa ukuntengantenga kusekhona Covid|
I-Polyurea Coatings Market izofinyelela ku-$1500 Million...
Umongameli Wamahhotela AseNew Wharf umemezele
Okthoba 4, 2021 ku-18: 34
"Umqondo womhlambi" huh? Ingabe lesi yisiliphu sikaFreudian? Wozani kubahleli, singenza kangcono.
Okthoba 4, 2021 ku-06: 11
Ngingumhlali waseHawaii futhi ngokwazi kwami, amakhasimende alanda kuphela ama-oda ezindaweni zokudlela AKUFANELE akhombise ikhadi lokugoma noma imiphumela yokuhlolwa engemihle.
Lokho kusebenza kuphela ekudleni kuzivakashi.
Ngisebenza esitolo sokudla nge-deli futhi ngenza igilosa yetoho nokulethwa kokudla.